Fri, Jun 22, 2018 | 09:28:20 NST
ददि सापकोटा - महिलाहरु साँझमा बाहिर एक्लै निस्कन डराउँछन् । एकलासको बाटो हिड्नु परे दशपटक सोच्छन् । बस्ती नभएको वा सुनसान ठाउँ पार गर्नुपर्दा महिलाले दाजुभाइ वा कोही भरपर्नेको साथ खोज्छन । पुरा बिश्वास नभएका पुरुषसँग तर्केर हिँड्छन् ।
नाममा के छ, हजुर ?
प्रकाश सायमी - व्हाट इज इन दी नेम व्हिच् वी कल दी रोज, बाइ एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट् । एकाविहानै प्रातः स्मरणीय कवि शेक्सपियरलाई सम्झिन्छु, उनले नै पहिलो पटक भनेका थिए इं पंक्ति आफ्ना कृति मार्फत् । उनको यो भनाई को अर्थ सारांशमा यति हुन आउँछ, हामीले गुलाफलाई जुन नामले बोलाए पनि गन्ध त्यही हुन्छ तर नामले के फरक पार्छ ।
चालककै गल्तीले मात्र सधैं दुर्घटना हुदैन र एउटै उपायले मात्र पनि रोकिदैन
विनय गुरागाईं - सडक दुर्घटना सम्बन्धी आफूसँग सम्बन्धित घटनाबाटै कुरा सुरु गरौं । २०५३ साल । बाल्यकालदेखिकै साथी र म सुनसरीको इटहरीबाट हिरो साईकलमा मोरङको सुन्दरपुर बाँसबारी जाँदैथियो । बुढीखोला पुलमा हामीले अगाडिको रिक्सालाई ओभरटेक गर्‍यौ । रिक्सा र साईकलका पाङ्ग्रा जुँधे ।
मेरो मोबाइलको अप्रिय कथा
प्रकाश सायमी - मैले मोबाइल लिँदा देशमा हरेक क्षेत्रका १००–१०० मान्छेलाई मोबाइल दिइएको थियो । मेरो नम्बरमा कहिले काहिँ दर्शन सरकार भनेर फोन आउँथ्यो, कहिलेकाहिँ दीप्स् बाबा हो भनेर फोन आउँथ्यो ।
हिउँमा बिलाउन खोजेर पनि बाँचेको क्षण
रमेश पाण्डे - हामी ट्रेकिङको लागि अक्टोबर ७ मा काठमाडौंबाट हिँडेका थियौं । मसँग सिंगापुरको एकजना पर्यटक र साथी नन्द राईसँग चाहिँ बेलायतका दुईजना पर्यटक थिए । १३ तारिख बेलुकी थोरङफेदी पुग्यौं । १४ तारिख बिहानको ३ बजे हामी त्यहाँबाट थोरङपासतर्फ अघि बढ्यौं ।
सुजनचन्द्र पौडेल - काठमाडौंको बबरमहलमा सोमबार भएको दुर्घटनामा तीन जनाको निधन भयो भने अन्य आठ-दश जना घाईते भए । केहि दिनअघि मात्रै दसैँ मनाएर फर्किरहेका यात्रु बस पल्टिँदा डोटीमा तीस जनाले ज्यान गुमाए भने केही घाईते भए ।
पहिले राजाको गाउँ अहिले राष्ट्रपतिको
विनय गुरागाईं - घरबाट हिडेको दुई घण्टापछि हामी सप्तरीको मुहलीमा बिहानी नास्ताका लागि रोकियौ्र । खाजा खाई सकेर निस्कने बेलामा नास्ता घर साहूजीको प्रश्नले एकछिन असहज तुल्यायो । साहूजीले प्वाक्क सोधे, ‘यादवको गाउँ जान लाग्नु भयो ?’ हामी अल्मलिएको साहूजीले बुझेछन् क्यारे, आफैंले सहजीकरण गरे ‘पहिले राजाको गाउँ अहिले राष्ट्रपतिको । राष्ट्रपति यादव भएपछि यादवको गाउँ भएन त?’
बरु आफ्नो नभन्नुस्, खुट्टामा ढोग्दिन
विज्ञान शर्मा - सोसल मिडियामा आफ्नो श्रीमतीलाई खुट्टामा ढोगाइरहेको तस्बिर एक राजनीतिकर्मीले फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि ढोगको विषयमा बहसहरु भए । म यहाँ मेरो विचार राख्न चाहन्छु । म कसैले कसैको पनि खुट्टामा ढोग्न हुँदैन भन्ने विचार बोक्छु ।
यसकारण म अरुलाई ढोग्छु, मलाई अरुले ढोग्छन्
मिलन तिमिल्सिना - घरबाट काठमाडौं आउँदा र काठमाडौंबाट घर जाँदा छिमेकका धेरैले आफ्ना बाआमाको खुट्टामा ढोग्छन् । किन हो मलाई सानो छँदा यस्तो संस्कार सिकाइएन । सानोमा नसिकेपछि ठूलो भएपछि पनि जानिएन । कहिलेकाहीँ लाग्छ, म मात्रै यस्तो छोरो होला धेरैपछि भेट हुँदा र धेरै दिनको लागि टाढा जाँदा बाआमालाई नढोग्ने ।
धेरै कुरा बोल्ने एउटा तस्बिर
इन्द्रध्वज क्षेत्री - नेपाली महिला पत्रकारहरुको संस्था सञ्चारिका समूहले एउटा फोटोसहितको सानो समाचार आफ्नो अनलाइनमा पोष्ट गरेको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसको प्रवास संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका संयोजक बिष्णु सुवेदीले आफ्नी श्रीमतीलाई खुट्टा ढोगाइरहेको र उनले प्रसन्न मुद्रामा आशीर्वाद दिएजसरी टाउकोमाथि हात लगाइरहेका छन् ।
बुधबारको सिंहदरबार सुनसान कि चहलपहल
शान्तराज सुवेदी - बडादसैँको बिदामा उपत्यका बाहिर घर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु मान्यजनको हातबाट टिका लगाउन आआफ्नो घर जाने प्रचलन पुरानै हो । यो चाडलाई विशेष महत्व दिई मनाउने हुनाले उपत्यका बाहिर जाने कर्मचारीहरु पनि बिदा भन्दा केहि बढी समय आफूले पाउने बिदा समेत लिई थप अवधि बस्ने चलन पनि छ ।
घन पोखरामा पाईला टेक्दा
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङको घनपोखराको नाँयूमा गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनका अध्यक्ष शेष घले आफ्नो जन्मस्थानमा आउने गाइँगुइँ चलिरहेको थियो । तर, ८७ वर्षका तीर्थराज घलेलाई भने पटक्कै विश्वास लागेको थिएन । काठमाडौंबाट हिँड्यो रे भन्ने सुनेका तीर्थराजले २० मिनेट वित्न नपाउँदै शेष घलेलाई आफ्नै आँखा अगाडि देखेपछि उहाँ तीनछक पर्नुभयो ।
सकसलाग्दो सहमति, असरल्ल असहमति
मिलन तिमिल्सिना–सम्झिरहने हो भने स र अ बाट उठ्ने शब्दका प्रयोग राजनीतिमा असरल्ल रैछन् । सबैतिर सराबर समेटिने स र अ का शब्दले राजनीतिमा सपना र सम्भावना, साथ र सहयोग, सम्बन्ध र सहकार्य, संवाद र सहमतिको बाटोलाई फराकिलोसँगै अस्पष्ट र अपुरो, अलमल र आलटाल, अप्ठेरा र अर्घेल्याईं पनि निम्ताईरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको गरिमा र सल्लाहकारको अक्षमता
इन्द्रध्वज क्षेत्री - प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा खिचिएका आपत्तिजनक र अपमानजनक तस्बिरहरु सोसल मिडिया र अनलाइनहरुमा आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्ति मात्र नभइ संस्था हो। यसले उनको मात्र होइन राष्ट्रकै मानमर्दन भइरहेको छ ।
टीका थाप्ने तर दक्षिणा नलिने ! यसो गरे कसो होला ?
मिलन तिमिल्सिना– दसैंलाई दशा बन्न नदिन यसो गरे कसो होला ? माइती, मावल, ससुराली या आफन्तकहाँ जाने, भेटघाट गर्ने, टीका थाप्ने, तर दक्षिणा लेनदेन नगर्ने । मासु खाने, तर छरछिमेकी मिलेर पालैपाले खसी काट्ने । थोरै ल्याउने, पकाउने, खाने । यसो गर्न किन सकिंदैन ?
हामी किन आलोचना सुन्न सक्दैनौ ?
विनय गुरागाईं - जब मैले एउटा भनाई सुनें त्यो मलाई खुबै मन पर्नथाल्यो । आफूलाई धेरै मन परेकोले होकी हिजोआज त्यो भनाई अरुले पनि सुनुन् र मनन गरुन भन्ने चाहना बढी नै हुन्छ ।
नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि भने छैन
खगराज बराल - सन् २०१५ भित्र सबै लक्ष्य पूर्ण हासिल हुनसके पनि प्राप्तिका दिशामा देखिन्छन् । प्राप्त उपलब्धिहरू ‘खोई खोला ? सुक्यो’ भने जस्तो हराएर जाने होइनन्, आगामी दिनमा थप उत्साहका साथ थप उपलब्धि हासिल हुँदै जानेछन् । सबैका लागि शिक्षाका विषयमा सकारात्मक मनस्थिति लिएर हेर्ने हो भने नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि भने छैन ।
जानी राखौं अदुवाको गुण
डा. अरुणा उप्रेती - आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिमा अदुवालाई ठूलो महत्व दिइएको छ । आयुर्वेदमा अदुवालाई महाऔषधको नाम दिइएको छ । अदुवाको औषधीय गुणले गर्दा नै होला फिलिपिन्समा अदुवा चपायो भने दुष्टात्माहरू नष्ट हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
कतै मन लोभ्याउने झरना, कतै कहालीलाग्दो पहरा
राजन थपलिया - मनाङ गाउँमा फापरको बैंस देख्दा चकित परे । फापर फुलेर बारीका गरा नै राताम्मे थिए । ठाउँ ठाउँमा सुविधायुक्त होटल, लज भएकाले रोजेको खाना खाए । लोकल स्याउ पनि चाखे । हामी नेपाल घुम्न फेरि आउनेछौं,' उनीहरूले भने ।
बलात्कारीलाई फाँसी होस्
सन्तोष पौड्याल - केहि दिनअघि काभ्रेमा आफ्नै बाबुबाट छोरी बलात्कृत भएको समाचार आएको पाँच दिनपछि नवलपरासीको कावासोतीमा सुतिरहेकी महिलालाई एक सैनिक जवानले दुर्व्यवहार गरेको समाचार प्रकाशित भयो ।
कृष्ण गुरागाईं - निहाउ निहाउ…. भक्तपुर दरबार स्क्वायरको प्राङ्गणबाट मन्दिरको फोटो खिच्न क्यामरा मास्तिर तेर्स्याउने वित्तिक्कै उनी मुसुक्क हाँसेर नमस्कार गर्छन् । कुनै पर्यटकको आखाँ उनीमा अडियो भने उनी हौसिदै क्यामराका लागि पोज फेर्छन् - ज्ञान मुद्रा वा ध्यान मुद्रा, मुस्कान यथावत ।
पचास डलरको चुम्वन
पुष्कर शाह – लाइबेरियाको राजधानी मोन्रोभियाको ‘क्ले’ भन्ने ठाउँमा रहेछ इमिग्रेसन कार्यालय । “चपचप ।” इमिग्रेसन अफिसरले मेरो पासपोर्ट चेक गरेपछि भन्यो । मैले चप भनेको थाहा नभएको बताएँ र सरासर अघि बढेँ । केही पर पुगेपछि त्यो हाकिम फेरि करायो, मानौँ, मैले उसको चपचप खोसेर लगेको थिएँ, “गिभ मी चपचप ।” “मलाई थाहा छैन चपचप के हो ?” मैले भनेँ ।
मध्यपश्चिमको बाढी मेरा आँखामा
कालिकाप्रसाद उपाध्याय - क्वीन्स्ल्याण्डको त्यो बाढी पनि यस्तै विनाशकारी थियो । फरक यत्ति हो, क्वीन्स्ल्याडमा उद्धार र राहत फटाफट भएको थियो, मध्यपश्चिममा अहिलेसम्म पर्याप्त मात्रामा हुनसकेको छैन ।
श्रद्धाञ्जली सरोज गोपाल:कुरा धेरै बाँकी थिए, तर अब तपाई नै हुनुहुन्न !
गोपाल गुरागाईं - देउराली उकाली चढेर ...... सुन्ने बित्तिकै मेरो मन भोजपुर बजार नजिकैको देउराली डाडा र बजारमा हिड्न र आँखा अगाडि नाच्न थाल्थ्यो । अनि रेडियोमा गीतको बोल बिजयपुर खोला ... पुग्दा मेरो मन आफूले नदेखेको धरानको बिजयपुर भन्ने ठाउँको कल्पना गर्थ्यो ।
युएर्इमा बाटो बिराएका नेपाली महिला
मेघराज सापकोटा – जमाना फेरिएको छ । हिजोसम्म धन कमाउन लोग्ने मान्छे मात्र बिदेश जाने समाजमा आजकल बैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरु पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । यो कथा रस अल खेइमह भन्ने ठाउँको हो जुन दुबइबाट १०० किलोमिटर उत्तरमा पर्दछ ।
सूचनाको हक र यसको व्यवहारिक प्रयोग
नारायण भूषाल - सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने काम, त्यस सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसंग सम्बन्धित लिखित सामग्री वा जानकारीको बैधानिक दाबी गर्नुलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यसलार्इ सार्वजनिक निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने विकल्पको रुपमा पनि लिने गरिन्छ ।
मेरो आत्मकथाको सुखद शुरुआत र दुखद अन्त !
गोपाल गुरागाई - अल्छिका जति जैसीले पनि जान्दैनन् भन्ने कुरा मेरो हकमा खुब लागू भो । किताब लेख्ने सुर कसेको महिनौ भैसक्यो । कतिपल्ट बिना योजना थालौ जस्तो लाग्यो । तर कहिले अल्छि लाग्ने ! कहिले साँझ पर्‍यो कि सोमरसतिर मन जाने !
कोशी तटमा कालो दिनको सम्झना
सुमन पुरी – सिन्धुपाञ्चोकको माङ्खा जुरेमा पहिरो खसेर सुनकोशी थुनिएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएसँगै सुनसरीको बराहक्षेत्रदेखि हरिपुरसम्म कोशी कोरिडोरका वासिन्दाको कान ठाडो हुन थाले । ‘पत्रकारज्यू यो बोली अन्तिम पनि हुन सक्छ । पानी बढ्न थालेको हो कि के हो भन्नुपर्‍यो ।’
यसरी उपयोगमा आउनसक्छ 'बदमास झार'
कालिकाप्रसाद उपाध्याय - पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको एउटा झार जसलाई कोही बदमास झार भन्छन त कोही डन घाँस । वैज्ञानिक रूपमा‘पार्थेनियम हेस्टेरोफोरस’ भनिने यो झारलार्इ मानिसहरुले अचेल व्यंग्यात्म पारामा सांसद झार पनि भन्न थालेका छन् । भारतमा भने ठाउँ अनुसार यसलाई ‘कंग्रेस घाँस’, ‘गाजर घाँस’ र ‘चटक चाँदनी’भनेर उल्लेख गरिंदो रहेछ ।
आरजु म्याडमलाई लाग्यो होला-यो जर्नेल पनि जड्याहा नै रहेछ
रुकमाङ्गद कटवाल - खासमा प्रधानमन्त्री देउवासँग मलाई परिचित गराएको सुरक्षा परिषदले नै हो । म दिनमा एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने वा ब्रिफिङ गर्ने मौका पाउँथेँ । यही क्रममा उहाँ मेरो कामबाट प्रभावित हुनुभएको थियो ।
व्यंग्य–जय मोदी महात्म्य
मिलन तिमिल्सिना – केहीले भने मोदी आउनुअघि नै पिटिए । अर्काथरीले भने मोदी आएपछि पिटिए । कुरो नबुझेर धेरै तर्सिए । हैन बुढा प्याट प्याट मान्छे पिटी हिँड्ने खालका मान्छे रैछन् कि क्या हो । त्यसो त हुन नपर्ने । तर हैन रहेछ विद्युत्त व्यापार सम्झौतालाई पिटीए भनेका रैछन् ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व रोक्ने चुनौती
भावुक योगी – बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यस क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दा स्वतःस्फुर्त रुपमा वन्यजन्तु संरक्षण अभियानमा जुटे । तर जंगली जनावरको आतंक न्युनीकरण गर्न नसक्दा र भएका जनधनको क्षतिपुर्ति र राहत नपाउँदा उत्साह घट्न थालेको छ ।
मोदी भ्रमणको अर्को पाटो
माधव दुलाल – साउन १८ र १९ गते सबैको ध्यान एकातर्फ मात्रै केन्द्रित भयो । खुशीको खबर १७ बर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालको औपचारिक भ्रमणमा थिए । १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं आएसँगै सिन्धुपाल्चोकको जुरे घटना छायाँमा पारियो ।
डा. आविश अधिकारी – देशमा राजनीतिक उथलपुथल हुन थालेपछि, वीर चोखो रहन सकेन । सरकारी अस्पतालमा सरकार फेरिएपछि नेतृत्व फेरिन थाल्यो । देशको प्रमुख अस्पताल चलाउन पाउने पदमा पुग्नलाई डाक्टरहरू नै राजनीतिक शरणमा पर्न थाले ।
भारतलाई गाली गर्ने बाटो बन्द भयो
डा. चिरञ्जीवी नेपाल - मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्न दुईवटा चिज महत्वपुर्ण छ, बजार र पुँजी । भारत हाम्रो लागि ती दुवै हो । संसारमा सवै भन्दा ठुलो बैंक बनाउने भनेर ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका मिलेर ब्रिक्स बैंक खोले ।
मोदी भ्रमण र सुदूर सीमाको अपेक्षा
शंकरसिंह धामी – मोदी भ्रमणको क्रममा चर्चा हुनुपर्ने सबैजसो विषय प्रसंगले स्थान पाएका छन् । यद्यपि एउटा महत्वपूर्ण विषय भने छुटेको छ, सीमा विवाद । पश्चिमी सीमानाका नागरिकले मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानीको विवाद समाधान भएको देख्न चाहेका छन् ।
नेपाल उच्चतम प्राथमिकतामा
नरेन्द्र मोदी - धेरै बर्ष अघि म तिर्थालुको रुपमा म नेपाल आएको थिए । यो भनाई छ की तपाईले एक पटक नेपालको भ्रमण गर्नुभयो भने यो जीवन पर्यन्तमा बदलिन्छ । प्रथमत यस सुन्दर देशको साथीको रुपमा म पेरी फर्केर आएको छु । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः आउन पाँउदा मैंले भाग्यशाली महसुस गरेको छु ।
राजेश पायल राईको चरित्र हत्या गर्नु मेरो उद्देश्य थिएन
भूमिराज पराजुली - गएको आइतबार साँझ ६ बजेतिर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मलेसियाका अध्यक्ष सुन्दर आलेमगरले टेलिफोन गर्नुभयो । ‘सर आज खुकुरी रेष्टुरेन्टमा राती ९ बजे टेरिया मगरको सम्मान कार्यक्रम छ सकेसम्म आउनुस् है’ भन्नुभयो उहाँले । मैले कार्यक्रम निकै राती हुने रहेछ सकिएपछि मलाई कोठामा फर्किन समस्या हुन्छ, बरु भोली बिहान टेलिफोन गरेर समाचार बनाउँला भनेँ । भोलीपल्ट मैलै मलेसियाबाट रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चार माध्यम उज्यालो अनलाइनबाट खबर आयो ‘हिजो जनाजाति महासंघले गरेको टेरिया मगरक...
आश गुरुङ – गुरुङ जातिको उद्गमस्थल मानिने लमजुङमा यो समुदायको बाक्लो बसोवास छ । हिमाली काख र स्वच्छ हावापानी रुचाउने गुरुङ समुदायको मौलिक कला र संस्कृतिले धेरै पर्यटक पनि आकर्षित गरेको छ ।
यूवालाई पशुपालनमा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम
डा.लोकनाथ पौडेल - पशुपालन व्यवसाय कृषिको अभिन्न अंग हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको छ । पशुपालनमा पनि दुधसँग सम्बन्धित क्षेत्र उच्च महत्व पाउनुपर्ने क्षेत्र हो । पशुपालन क्षेत्रको योगदानमध्ये ७३ प्रतिशत योगदान डेरी क्षेत्रले पुर्‍याईरहेको अबस्था छ ।